Fivarotana tsara indrindra & fialan-tsasatra Assam Tour | Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa antsoy ny + 91-993-702-7574
Hamafiso ny mpandeha ao anatinao Sand Pebbles Assam Tour Package. Assam dia manana tosika mpizahatany ho an'ny karazan'olona rehetra, toy ny toetran'ny mpihaza, mpirenireny, mpilalao tantara an-tsehatra, mpihaza biby na mpaka sary. Mizara ny sisintaniny amin'i Bhutan, Nagaland, Manipur ary Mizoram, i Assam dia fanjakana mahafinaritra antsoina hoe 'vavahady mankany amin'ny faritra avaratra'. Ny Assam Tour Package dia ahafahanao mijery ity toerana mahafinaritra ity. Assam dia tany tsara tarehy sy be voninahitra, fanjakana izay misy ny Brahmaputra mahery. Ny tsara indrindra amin'ny Pakistana Assam Tour Package no singa tsara indrindra amin'ny natiora, kolontsaina ary tantara. Ireo fonosana ireo dia novokarin'ny manam-pahaizana momba ny fitsangatsanganana mba hanomezana traikefa fialan-tsasatra tsy misy farany ho an'ireo mpandeha. Mirehareha amin'ny toetr'andro manjavozavo, toeram-pijerem-biby mahavariana, toeram-pokonolona matevina, manondraka rano, farihy tsara tarehy ary tontolo tsy manjary, Assam dia toerana iray ahafahanao mametraka ny fanahinao. Ny Pakam-piarahamonina Assam Tour dia hanatanteraka ny fizahantany fantasy.
Feno biby fiompy sy biby miavaka indrindra any Assam, ilay hatsaran-tarehy malaza amin'ny havoana, renirano sy ny lembalemba mihodinkodina, ary ny kolontsain'ny kolontsaina sy ny fety. Azonao atao ny miaina ny Best of Assam Tour miaraka amin'ny Sand Pebbles Assam Tour Package. Assam no mpamokatra ny Timber sy ny Tea eto amin'ny firenena ary manana ny Refinery Oil Oil any Inde. Ankoatry ny Timber sy ny Tea, Assam koa dia nomena ny Fitrandrahana solika, gazy voajanahary, Coal, Limestone sns. Assam dia tanimbolin'ny miafina, fiainana ary angano. Iray amin'ireo fanjakana matanjaka indrindra any Inde izy io. Fantatra ihany koa i Assam noho ny fitaovana famokarana natao tao amin'ny harona, bamboo, bras sns. Miomàna handinika ity tany mistika ity amin'ny Sand Pebbles Tour.
Kaziranga mankany Shillong mankany Guwahati
Shillong sy Guwahati
The Triangle Eastern